ASCII कला: यो के हो, कला प्रकार ASCII कला र कार्यक्रमहरू | क्रिएटिव अनलाइन
एनकर्नी आर्कोया | | छविहरू
एक डिजाइनरको रूपमा, तपाई ASCII आर्ट भर आउनु भएको हुन सक्छ, यसलाई समय - समयमा पाठ कला पनि भनिन्छ। यस प्रकारको डिजाइनले उनीहरूसँग छविहरू सिर्जना गर्न पाठ प्रतीकहरू प्रयोग गर्दछ।
तर, ASCII कला के हो? त्यहाँ कस्ता प्रकारका छन्? यो कसरी गर्न सकिन्छ? यी सबै र बढि केहि तल हो, हामी तपाई संग कुरा गर्ने छौं, किनकि यो ASCII कला दिन प्रति दिन तपाईको सोचाइ भन्दा धेरै छ।
1 ASCII कला के हो?
2 ASCII कला को आधार
3 ASCII कला प्रकारहरू
3.5 अन्य प्रकारको ASCII कला
4 ASCII कला र ANSII कला बीचको भिन्नता
5 कसरी ASCII कला चित्रहरू सिर्जना गर्ने
5.1 मशाल नरम ASCII कला स्टूडियो
5.2 बीजी ASCII
5.3 Textaizer प्रो
5.5 कसरी वर्डको साथ ASCII कला सिर्जना गर्ने
ASCII कला के हो?
ASCII कला ASCII कोडबाट आउँदछ। यो एक को बारे मा छ अमेरिकी कोड (छोटोका लागि, सूचना ईन्टरचेन्जका लागि अमेरिकी मानक कोड) जुन वर्णहरूको ढाँचामा पारित गरियो कि जानकारी आदान प्रदान को सेवा। अर्को शब्दहरुमा, हामी वर्णमाला जस्तो उपकरणको बारेमा कुरा गर्दैछौं। यो कोड टेलिग्राफीको प्रयोगको साथ प्रयोग गर्न शुरू भयो।
विशेष रूपमा हामीले बेललाई हेरेका छन, जसले who-बिट कोड प्रयोग गर्ने योजना गरेका थिए उनीहरूले पहिले नै प्रयोग गरेको कोडमा विराम चिह्न र लोअरकेस अक्षरहरू थपेर बाउडोटको। यद्यपि उनी अन्ततः अमेरिकी मानक एजेन्सी (एएसए) को उपसमितिको हिस्सा भए जसमा एएससीआईआई सिर्जना भयो।
पहिलो कोड प्रकाशित भएको पहिलो पटक १ 1963 XNUMX मा थियो, जहाँ पंचफ्लेक्स (^) को सट्टा एक एर्रो देखियो, जबकि डाउन एरो अन्डरस्कोरको ठाउँमा राखियो।
धेरै बर्ष, प्रतीकहरू धेरै परिवर्तन भयो। हाल, एएनएसआई x3.4..1986-१-1991 XNUMX the एक शासित एक हो (यद्यपि त्यहाँ १ XNUMX XNUMX १ मा एक संशोधन भएको थियो जुन ASCII कोड मा सबै परिवर्तन गरेन।
वास्तवमा, ASCII कोड ASCII कला आफैं भन्दा धेरै जटिल छ किनकि यो केवल अल्पसंख्यक अनुशासन मात्र हो जुन प्रिन्ट गर्न योग्य ASCII वर्णहरूमा आधारित कुनै पनि छवि रचनाको लागि जिम्मेवार छ। नतीजा पोइन्टिलिज्म टेक्निकको साथ प्राप्त हुने कुरासँग मिल्दोजुल्दो छ, राम्रो दृश्यको साथ यदि छवि नजिकबाट देखी टाढाबाट अवलोकन गरियो भने।
यो को लागी धेरै लोकप्रिय भयो छविहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ र आजकल त्यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू छन् जुन तपाईंलाई यस प्रकारको रेखाचित्र सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, साथै भिडियोहरू।
ASCII कला को आधार
ASCII कला एक विशेष कोड मा आधारित छ, तथाकथित ASCII कोड। र के यो प्रत्येक चरित्र, एक चिठी, एक विशेष ... ००० देखि २00 सम्मका नम्बरहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। वास्तवमा यदि तपाईं ती सबैलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई एउटा वेबसाइटमा छोड्छौं जहाँ तपाईं फेला पार्न सक्नुहुनेछ। ती सबै।
आधारभूत--बिट कोडले निम्न बताउँदछ:
त्यो ० देखि from१ सम्म क्यारेक्टरहरूको लागि प्रयोग हुँदैन, तर ती «नियन्त्रण» को हुन्।
त्यो to 65 देखि। ० ठूला अक्षरहरू हुन्।
To to देखि १२२ सम्म साना अक्षरहरू हुनेछन्।
ASCII कला प्रकारहरू
समयसँगै, ASCII कला विकसित भएको छ र विभिन्न प्रकारका कलाहरू देखा परेको छ, जस्तै निम्न:
लाइनर ASCII कला एक हो कि, संख्यात्मक कोड प्रयोग गर्नुको सट्टा, यसले के गर्दछ रेखाहरू प्रयोग गर्दछ, कहिले पातलो, कहिले डटेड, कहिलेकाँच बार र थोप्लाहरूसँग ...
यो धेरै सरल र साना चित्रहरू बनाउनको लागि आदर्श हो, जति ठूलो छ, यसलाई पूरै देखिने छैन।
यस अवस्थामा, रेखाचित्रको सिल्हूट सीमेट गर्नुको सट्टा, यो के गर्छ «यसलाई रंग», तर यसको लागि कोड प्रयोग गर्दै। यो मध्यम र ठूला छविहरूको लागि धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ, यद्यपि सानामा, जब सम्म तिनीहरू धेरै साधारण र सजिलो हुन्छन्, तिनीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ग्रेस्केल माथिको जस्तै ठोस ASCII कला प्रयोग गर्दछ। जे होस्, तिनीहरू छायाँको साथ छविहरू निर्धारण गर्न कोडमा मात्र होइन कोड र colorमा पनि फरक वर्णहरू प्रयोग गर्दछन्। तसर्थ, यसको साथ अनुहारहरू चित्रित गर्न यो सबै भन्दा उपयुक्त छ।
यो प्रविधिको सब भन्दा जटिल छ, जबकि परिणामहरू धेरै भव्य हो।
यस प्रकारको ASCII कला यति प्रख्यात छैन। र अझै पनी यो अवस्थित छ। तपाईं मा यसको एक प्रमाण देख्न सक्नुहुन्छ एलिस इन वण्डरल्यान्ड पुस्तक। अर्को विकल्प कविता वा पाठ सिर्जना गर्नु हो जुन टाढाबाट हेरेर, जनावर वा वस्तुलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ।
वास्तवमा, त्यहाँ केहि वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं यो शब्द एक शब्द वा वाक्यांश राखेर हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य प्रकारको ASCII कला
हामी अन्य एएससीआईआई कलाहरू बिर्सन सक्दैनौं, ती मध्ये धेरै जसमा पहिलेका भन्दा भिन्नताहरू वा संयोजनहरू।
ASCII कला र ANSII कला बीचको भिन्नता
व्यक्तिहरूले गर्ने एक ठूलो गल्ती ASCII कला र एएनएसआईआई कला एकै हो भनेर सोच्दै छ। तर यो सत्य होइन।
वास्तवमा, ASCII मूल हो, जहाँबाट एएनएसआईआई व्युत्पन्न गरिएको छ, जुन त्यो हो जसले अधिक क्यारेक्टरहरूको प्रयोगलाई अनुमति दिन्छ। (MS-DOS को ती) र अधिक र colorsहरू (१ colors रंगहरू सम्म)।
कसरी ASCII कला चित्रहरू सिर्जना गर्ने
ASCII कला चित्रहरू ASCII कोड प्रयोग गरेर सिर्जना गर्न सकिन्छ तर अन्य पात्रहरू वा भावनात्मकहरू प्रयोग गरेर। वास्तवमा, तपाईं यसलाई आफैं सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, या त छवि संपादक वा पाठ सम्पादकको साथ। यो गर्नका लागि तपाईले किबोर्डको आफ्नै क्यारेक्टरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ फिगर सिल्हूट्स सिर्जना गर्नका लागि आदर्श।
अर्को विकल्प प्रयोग गर्नु हो युनिकोड विशेष वर्ण, जसले परिणामलाई अधिक ठूलो योगदान दिन्छ।
कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा, तपाइँ बिभिन्न विकल्पहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि:
मशाल नरम ASCII कला स्टूडियो
यो साधारण ASCII कला सिर्जना गर्नका लागि सम्पादक हो। उहाँ यो कलाको साथ छवि परिवर्तन गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ।
यदि तपाईले खोजिरहनु भएको तस्विर सम्पादक हो कि यस प्रविधिलाई प्रयोग गर्दछ भने, त्यसोभए तपाईले यो प्रोग्राम चलाउनु पर्छ। यो नि: शुल्क छ, विगतको जस्तो, र यसले तपाईंलाई ज्यादै धेरै कब्जा गर्दैन।
का लागि आदर्श कार्यक्रम तस्वीरलाई अक्षर र शब्दमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। तपाईं यस प्रविधिको साथ सुरुबाट पनि मोजेकहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्को प्रोग्राम जुन हामी फोटोलाई ASCII कलामा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गर्न सक्छौं।
कसरी वर्डको साथ ASCII कला सिर्जना गर्ने
यदि तपाईंसँग वर्ड, ओपनअफिस, लिब्रे अफिस वा समान छ भने, तपाईं यो कोडको साथ आफैं एउटा डिजाईन सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले केहि पक्षहरुलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ:
राम्रो फन्ट छनौट गर्नुहोस्। यस मामिलामा हामी सिफारिस गर्छौं कि तपाईले टाइम्स न्यू रोमन, जर्जिया, एरियल, भर्दाना, कमिक सान्स, तहोमा ...
यदि तपाईं विशेष क्यारेक्टरहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले फन्ट प्रयोग गर्नुपर्नेछ जुन वास्तवमै ती सबैलाई, जस्तै एरियल वा क्यालिब्रि।
यहाँ प्राप्त परिणामको केहि उदाहरणहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » छविहरू » ASCII कला
वाटरमार्क: के हो, यो किन महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई चरण-देखि कसरी सिर्जना गर्ने
यहाँ एडोबबाट प्रीमियर प्रो, प्रभावहरू, र प्रीमियर रशको लागि मार्चको लागि के नयाँ छ